Songadina Bolivia – 2005 · Global Voices teny Malagasy
Songadina Bolivia – 2005
Voadika ny 03 Desambra 2018 6:33 GMT
Manoratra i Alexey hoe “tato ho ato aho dia gaga tamim-pifaliana tamin'ny fitantarana nataon'ny bilaogy sasany mahakasika ny toe-draharaha politika boliviana” ary tena sarotra tokoa ny tsy hiombon-kevitra aminy. Amin'ny fifidianana manokana any Bolivia izay nomanina amin'ny voalohandohan'ny volana Desambra, tsy mampino ny fahavitrihna sy ny fandresen-dahatra amin'ny fampisehoana ny firoborobon'ny politikan'ny firenen'izy ireo ny tontolon'ny blaogy Boliviana miteny anglisy.
Evo Morales (ato ihany koa), mpitarika ny MAS (Hetsika mankany amin'ny Sosialisma) no tena nisarika indrindra ny sain'ireo bilaogera, ny fampahalalam-baovao mahazatra, ary i Donald Rumsfeld. Alexey, tamin'ny lahatsorany farany, manazava hoe:
Rehefa manazava ny toe-draharaha ara-politika tamin'ny sasantsasany tamin'ireo namako aho, dia nilaza tamin'izy ireo fa tsy mino aho hoe i Evo Morales, kandidà avy amin'ny MAS (Movimiento al Socialismo), no handresy. Izy no mpitarika ny antoko lehibe mitarika ny vondrona politika hafa (izay vondrona hafa amin'ireo mahazatra eo amin'ny fitondrana). Na dia efa nahazo fanohanana tsara avy amin'ny vahoaka aza izy taloha, dia very fanohanana noho ireo olana atrehan'i Bolivia, volana vitsy lasa izay. Tamin'ny voalohany, niezaka naneho ny tenany ho tony kokoa tsy toy ny teo aloha izy, saingy taty aoriana dia lasa niha-nahery fihetsika kokoa rehefa hitany fa niampanga azy ho tony loatra sy tia mampiray ireo vondrona hafa. Farany dia nanapa-kevitra ny hampiasa tolo-kevitra tafahoatra (fandraisana ho fananam-panjakana ny etona ao amin'ny firenena) sy fepetra henjana (sakan-dalana) izy, ka very ny fanohanana azony taloha.
Ny herinandro lasa, naminavina i Miguel ao amin'ny MABB fa hiezaka hitady manam-pahaizana fotsy hoditra i Evo Morales, dia i Alvaro Garcia Linera ho filoha lefitra izay fomba hampiray ny havia. Nanamafy izany ankehitriny i Prensa Latina. Niasa mafy ihany koa i Miguel, nilaza fa miezaka mampiray ny ankavanana i Jorge “Tuto”, izay nahatonga ny “fanjakana manga, fanjakana mena” toy ny fizarazarana manerana ny firenena.
Blog from Bolivia nibilaogy lavalava momba ny fomba namoronan'ny filoha teo aloha, ‘Tuto” indray ny endrika ahafantarana azy mba hiantso ireo mpifidy vaovao taorian'ny fiverenany avy any Etazonia amin'ny maha-mpanolotsaina ara-politika azy. Eo am-panalàna ny diplaoma Ph.D. i Miguel Centallas izay nanavao vao haingana ny BoliviaWiki-ny mahafinaritra – lahatsoratra an-tserasera momba ny fanadihadiana nataony momba ny politika Boliviana – miaraka amin'ireo biografian'ny kabinetra vao haingana.
Misy ihany koa ny tabataba marobe tamin'ny bilaogy momba ny fifandraisana voalaza fa misy eo amin'i Evo Morales, Hugo Chavez, sy Fidel Castro izay tondroina am-pivazivaziana ho “ivon'ny ratsy” Amerikana Latina. Milaza i Miguel Buitrago fa mandoka fahatany an'i Evo Morales i Etazonia raha miampanga ny fanentanany fa tohanan'i Chavez sy Castro. Nanaiky i Miguel Centallas ary manazava: “Azo antoka fa tsy mila an'i Evo eo amin'ny fahefana i Etazonia. Saingy ny filazana izany dia manamafy ny fanohanan'i Evo an'ireo mpifidy anti-Amerikana.”Miezaka mamakafaka ireo antony manosika hafa misy i Boli-Nica, tamin'ny lahatsoratra lalina sy lavalava iray:
Ho an'i Chavez, manana ny antony manosika rehetra eran'izao tontolo izao izy hanakorontana an'i Bolivia. Nahoana? Voalohany satria mahafinaritra azy izany. Manampy amin'ny fanonganana governemanta mpanohana an'i Etazonia. Miteraka aretin'andoha ho an'i Etazonia ny governemanta toa an'i Sanchez De Lozada ary tonga mora izany. Manana tombony fanampiny amin'ny fiarahana amin'ireo mpifanolo-bodirindrina tahaka an'i Però sy Kolombia izy, izay matahotra karazana korontana tahaka izany. Fanampin'izany, mahazo “porofo” ny kolonely. amin'ny tsy fahombiazan'ny neo-liberalisma – Chavez lehilahy mampatahotra.
Tsy faly ihany koa izy mikasika ny filazan'i Morales fa hampisahana ny indostrian'ny etona ao amin'ny firenena ho an'ny fanjakana. Nathan ao amin'ny Trip Trap nanoratra momba an'i Bolivia sasantsasany rehefa nandehandeha manodidina ny tany Amerika atsimo izy, ary farany, azo antoka fa hilaza bebe kokoa momba ny fifidianana ho avy i Eduardo Avila, izay mitsidika ny atsimon'i Afrika ankehitriny rehefa miverina izy.